भोलि मङ्सिर ७ गते मंगलबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि मङ्सिर ७ गते मंगलबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
भोलि मङ्सिर ७ गते मंगलबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
admin November 22, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 352 Views
तपाइको दिन सामाजिक कार्यमा बित्नेछ। जसले गर्दा केहि धन खर्च हुनेछ । सरकारी कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। आफूभन्दा ठुलाबाट सहयोग प्राप्त हुदा मनमा आनन्द वृद्धि हुनेछ । टाढा वा विदेशबाट सन्तानको सम्बन्धमा शुभ समाचार प्राप्त हुन्छ। आकस्मिक धनलाभ हुनसक्नेछ।
तपाईको दिन शुभ र फलदायी हुनेछ। विशेष गरि व्यवसाय गर्नेहरुको लागि यस दिन निकै लाभदायी रहनेछ। व्यवसायमा पदोन्नतीको योग छ। पारिवारिक जीवनमा सुख प्राप्त हुनेछ ।
मानसिकरुप तथा शारीरिक रुपबाटबाट शिथिलता अनुभव हुनेछ। कार्य गर्ने जोश आउनेछैन। व्यवसायिक स्थलमा पनि कर्मचारीको व्यवहार नकारात्कम रहनेछ । धन खर्च हुनसक्छ।
शारीरिक तथा मानसिक रुपबाट अस्वस्थता बनिरहनेछ । त्यसैले नकारात्मकताबाट टाढा रहनुहोस। रिसलाई संयम राख्नुहोस। खर्च धेरै हुनेछ। यस दिन नया कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस।
श्रीमान-श्रीमतीबीच झगडा हुनसक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस। सांसारिक तथा अन्य प्रश्नहरूको कारण पनि तपाईको मनमा उदासीनता छाउनेछ ।
व्यवसायिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गर्ने सम्भावना बढी छ । पारिवारिक वातावरणमा सुखको स्नुभाव हुनेछ। शारीरिक र मानसिक रुपबाट तपाई स्वस्थ रहनुहुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ । रोगी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। प्रतिस्पर्धिमाथि बिजयी प्राप्त हुनेछ।
तपाई छलफल गरेर अरुलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुनेछ। परिश्रमको तुलनामा परिणाम सन्तोषजनक प्राप्त हुदैन। कार्यलाई सम्हालेर अगाडी बढ्नु पर्नेछ। खानपानमा ध्यान दिनुहोस । साहित्य लेखनमा रुचि बढ्नेछ।
बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio )प्रियजनहरूसँगको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्नेछ। शारीरिक र मानसिक रुपमा अस्वस्थताको कारण चिन्ता बढ्नेछ । धन खर्च हुन सक्नेछ। पारिवारिक वातावरण राम्रो रहदैन । मनमा प्रसन्नताको अभाव हुदा तपाईलाई अनिन्द्राले सताउनेछ।
तपाइको प्रतिस्पर्धीहरु पराजित हुनेछन्। शारीरिक र मानसिक रुपबाट स्वस्थ रहनेछ। नया कार्य सुरुवात गर्नको लागि समय अनुकुल छ। आफन्तको साथ आनन्दमयी समय बित्नेछ।
तपाइको दिन फलदायी रहनेछ । परिवारजनको साथ मनमुटाव हुदा मनमा ग्लानी महसुश हुनेछ। निरर्थक खर्च हुनेछ । स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। विद्यार्थीहरू अभ्यासमा रुचि राख्दैनन्।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट तपाइको दिन लाभदायी रहनेछ। पारिवारिक वातावरण आनन्दले भरिपूर्ण हुनेछ। साथीहरू र परिवारसँग आनन्दपुर्वक समय बिताउनुहुनेछ।
तपाई सबै कार्यहरूमा दिमागको एकाग्रताबाट फाइदा उठाउनुहुनेछ। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस । परिवारका सदस्यहरूसंग मतभेद हुनेछ।लेनदेनमा सोचेर निर्णय लिनुहोस्।
Previous अनिता खड्का बोल्न हिड्न नसक्ने भएपछि अस्पतालमा चल्यो रुवाबासी,फेरी पुरानै अबस्थामा फर्कीइन अनिता(भिडियो)
Next अर्को हप्ताको शनिबार सूर्यग्रहण लाग्दै : यी राशिलाई १५ दिनसम्म पार्नेछ अशुभ प्रभाव